China Magetsi kudziyisa ziso washer Fekitori, Magetsi kudziyisa ziso washer Kutengesa
BH36-1066 pedestal yemagetsi kudziyisa ziso kusuka
zvinhu l Eyewash: kushanda kumanikidza 0.25-0.6MPA. Sundira mubato wakavhurika, uye iyo aerosol mvura yeziso inoshambidzwa mukati me1 sekondi. Kureba uye kukona kwenzvimbo yemvura zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso chemunhu. Yeyewash kuyerera mwero iri ≧ 11.4L / min. l Shower: Dhonza dhonza-pasi lever, uye mvura yekugeza ichasaswa kubva mubheseni rekugezera mukati me1 sekondi, uye yekuyerera yekuyerera mwero iri ≧ 75.7L / min. Zvakaipa ...
BH32-1062B chigadziko chemagetsi kudziyisa ziso kusuka
zvinhu l Eyewash: kushanda kumanikidza 0.25-0.6MPA. Sundira mubato wakavhurika, uye iyo aerosol mvura yeziso inoshambidzwa mukati me1 sekondi. Kureba uye kukona kwenzvimbo yemvura zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso chemunhu. Yeyewash kuyerera mwero iri ≧ 11.4L / min. k Yeyewashing firita: yakakwira-simbi PP + 304 yakapetwa kaviri firita, iyo inogona kusefa tsvina mumvura, uye yakasaswa mvura iri aerosol, inovharira uye ge ...
BH32-1066 pedestal yemagetsi kudziyisa ziso kusuka
zvinhu l Eyewash: kushanda kumanikidza 0.25-0.6MPA. Sundira mubato wakavhurika, uye iyo aerosol mvura yeziso inoshambidzwa mukati me1 sekondi. Kureba uye kukona kwenzvimbo yemvura zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso chemunhu. Yeyewash kuyerera mwero iri ≧ 11.4L / min .. l Bhora vharuvhu: Iwo maviri-chidimbu bhora vharuvhu inogona kuita kuyerera kwemvura kweyeyewash mudziyo inosangana neAmerican standard. k Ziso kuwacha gungano: Iyo inoumbwa ne30 ...
BH30-1062B Magetsi kudziyisa eyewash ziso / kumeso kumeso
zvinhu l Shower: Dhonza dhonza-pasi lever, uye mvura yekugeza ichasaswa kubva mubheseni rekugezera mukati me1 sekondi, uye yekuyerera yekuyerera mwero iri ≧ 75.7L / min. Kushanda kumanikidza kuri 0.25-0.4MPA. l Eyewash: kushanda kumanikidza 0.25-0.6MPA. Sundira mubato wakavhurika, uye iyo aerosol mvura yeziso inoshambidzwa mukati me1 sekondi. Kureba uye kukona kwenzvimbo yemvura zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso chemunhu. Ziso ...